Rio Ferdinand oo soo jeediyay in la joogo waqtigii Manchester United ay ceyrin Laheyd Ole Gunnar Solskjaer | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Rio Ferdinand oo soo jeediyay in la joogo waqtigii Manchester United ay...
Rio Ferdinand oo soo jeediyay in la joogo waqtigii Manchester United ay ceyrin Laheyd Ole Gunnar Solskjaer
Halyeeyga Manchester United Rio Ferdinand ayaa su’aal galiyay booska Ole Gunnar Solskjaer ee kooxda, isagoo qiray in laga yaabo in la gaaray waqtigii ‘Usha lagu wareejin lahaa’ tababare kale.
Red Devils ayaa si weyn loogu qiimeeyay inay ku guuleysan karto horyaalka Premier League ka dib markii ay ku iibsadeen in ka badan 130 milyan ginni Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho iyo Raphael Varane suuqii xagaaga hore.
Laakiin United ayaa si niyad jab leh ku bilaabatay xilli ciyaareedka 2021/22 waxayna isku arkeen inay hoos ugu dhacayaan kaalinta lixaad ee kala sareynta ka dib markii ay si xun ula kulmeen afar guuldaro lix kulan oo horyaalka ah.
Solskjaer ayaa ku tilmaamay guuldaradii 5-0 ahayd ee ay kooxdiisu gurigeeda kala soo kulantay Liverpool inay ahayd ‘maalintiisii ​​ugu madaw’ ee kubbada cagta, waxaana ninka reer Norway uu la kulmay cadaadis aad u weyn, iyadoo sida Brendan Rodgers , Erik ten Hag iyo Ralf Rangnick lala xidhiidhiyay beddelka suurtagalka ah.
Ferdinand ayaa taageere u ahaa Solskjaer ka dib guushii xiisaha lahayd ee ay United ka gaadhay Champions League PSG bishii Maarso 2019 – isagoo ku qaylinaya ‘Ole’s wheel!’ isagoo ku damaashaadaya istuudiyaha BT Sport – wuxuuna daacad u ahaa saaxiibkiisii ​​hore intii uu kooxda ku jiray.
Ugu Danbeyn Ferdinand ayaa hada Bartiisa YouTube-ka ku sheegay in la Joogo Waqtigii Shaqada laga Ceyrin lahaa Solskjaer.
Previous articleKooxahee isticmaala Drones-ka lagu qabtay garoonka Muqdisho?
Next articleSawirro: Midowga Afrika iyo DF oo yeeshay kulan xasaasi ah kadib ceyrintii Mulongo
@Reuters Newcastle United ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhigtay daafaca Napoli Kalidou Koulibaly bartilmaameedkooda koowaad ee suuqa kala iibsiga ka dib markii...
War deg deg Ah: Naadiga Tottenham oo Ceyrisay Macalinkooda Nuno 4...